Annaga nagu saabsan - CUSUB MIDABKA BEAUTY CO., LTD
Midabka Cusub ee Beauty Co.,Limited
waa shirkad xirfad leh oo la isku halleyn karo oo ah Gel Polish ee Shiinaha.
Tan iyo 2010, waxaan ku hawlan nahay cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga tayada sare leh ee UV Gel alaabta Polish.
Alaabooyinka jelkeena waxaa ka mid ah: Saddex tallaabo jel, laba tallaabo jel, Hal tallaabo jel, Top & Base jaakad, jel dhise, Polygel, Xoojinta jel,
Rinjiyeynta jel, jel midabka saafiga ah, Platinum jel, wareejin jel,
Embossing Gel iyo wixii la mid ah.Waxaa jira in ka badan 2000 oo midabo iyo kooxdayada R&D oo si adag u shaqeeya,
midabyo badan iyo jel ayaa ku biiraya
Iimaankeenu waa "Cagaar & Caafimaad, Tayo aad u Wacan, Fashion, La Xisaabtankaro, Kharashka Favorable, Adeegga Heerka Kowaad".Si loo hago horumarka caafimaadka leh ee warshadahan, waxaan si cad u adkeyneynaa in aan aado wadada deegaanka , saaxiibtinimo iyo caafimaad leh soo saaraha jel Polish .Dhammaan alaabtayada waxaa la ansixiyay shahaadooyinka SGS, FDA iyo GMPC iyo la kulmaan xeerka suuqa maxaliga ah ee dibadda.
Qaaciddadayadu waxay ku jirtaa joogteynta wanaagsan iyo daboolka, dareenka rinjiga wanaagsan, jilicsanaanta jilicsan iyo muddada dheer, wax kasta oo ka yimaada alaabta aasaasiga ah ama midabka , waa kuwa aan sun ahayn oo aan waxyeello lahayn, dhammaantood waa 10 maaddooyinka bilaashka ah oo kaliya ayaa la soo saaraa ka dib markii shaqaalaha shaybaarka dhirta si shakhsi ah loo kormeero. alaabta.Si loo hubiyo in dhammaan jel jel ee xasilloon oo tayo wanaagsan leh, waxaan leenahay habka wax soo saarka aad u adag, qalab wax soo saarka sare leh, nidaamka kormeerka QC, farsamo & shaqaale tababaran sare.
Si aad u qabato isbeddelka moodada iyo taageerada astaanta caadada u guurto , waxaanu leenahay koox gaar ah si ay u horumariyaan caanaha cusub iyo midabada cusub sanad kasta , taageero macaamiisha oo leh noocyo kala duwan oo baakado ah , oo ay ku jiraan dhalada daabacan, calaamad gaar ah iyo sanduuqyo midab leh . Iyadoo in ka badan 150 shaqaale xirfad leh warshadda , waxaan ku siin awood weyn iyo waqti hogaamin degdeg ah .
Ku soo dhawoow inaad nala soo xidhiidho , waxaanu filaynaa inaanu si wada jir ah kuugula socono warshadaynta gelitaanka iyadoo la adeegsanayo xaalad guul-guul ah !